गुल्मीको सदरमुकाममै छैन आईसोलेसन: लकडाउन बाहेक अरु तयारी खै त ? - Gulminews
गुल्मीको सदरमुकाममै छैन आईसोलेसन: लकडाउन बाहेक अरु तयारी खै त ?
२०७८ बैशाख १८, २१:४१
बैशाख, १८ गुल्मी । देशका अन्य भागमा जस्तै गुल्मीमा एक्कासी कोरोना संक्रमित बढे । सदरमुकाम सहित आसपासका क्षेत्र समेटिएको रेसुङ्गा नगरपालिकाले विद्यालय बन्द बाहेक अरु केही सोचेन । अन्यत्र निर्णय नहुँदै विद्यालय बन्द ग¥यो । त्यसपछि नगरपालिका चुपचाप बस्यो । पहाडी जिल्लामा सक्रिय संक्रमित २ सय पुगे लकडाउन गर्ने सरकारी नियम छ । तिव्र गतिमा संक्रमित बढेपछि शुक्रबार जिल्ला कोभिड १९ संकट ब्यवस्थापन केन्द्र गुल्मीको बैठक बस्यो । लकडाउन गर्ने वा नगर्नेमा राजनितिक जुहारी चल्यो । सत्तापक्ष एमालेले जेजे भएपनि लकडाउन गर्नुहुदैन भनेर निस्कियो । अरु सबैले लकडाउन गर्ने सल्लाह दिए । राजनितिक जुहारी चलेकोेले प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्मा सरकारी नियममा अडान रहिन् । अर्को दिन शनिबार संक्रमित २ सय पुगे । त्यसपछि आइतबारदेखि लागु हुनेगरी गुल्मी जिल्ला २५ गतेसम्मका लागि लकडाउन गर्ने निर्णय भयो ।
जिल्लाका संक्रमित छुटफुट भेटिँदा विद्यालय बन्द गरेको रेसुङ्गा नगरपालिका त्यसपछिका तयारीमा चुपचाप बसेको छ । जिल्लाको सदरमुकाममा नै कोरोना संक्रमितलाई गम्भीर लक्षण देखिए राख्ने बेड छैन । पाल्पा, बुटवल र भैरहवा दौडाउनुको विकल्प छैन । जिल्लामा अहिले कोरोनाका संक्रमित परिक्षण गरिएका मध्ये प्राय सबैलाई भेटिने स्थिती आइसकेको छ । तर, जिल्लाको सदरमुकाम तम्घासमा रेसुङ्गा नगरपालिका र अन्य सरोकारवालाहरु लकडाउन बाहेक केही पनि तयारी नगरी चुपचाप बसेका छन् ।
रेसुङ्गा नगरपालिकाका प्रमुख डिल्लीराज भुसालले गुल्मी अस्पतालले बेड राख्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिए । “केन्द्रले कोरोना अस्पतालका लागि जिल्लाका सबै स्थानीय तहलाई रकम पठाएको छ ।” रेसुङ्गा नगरप्रमुख भुसालले भने, “हाम्रो स्थानीय तहलाई आउने रकम गुल्मी अस्पतालमा आएको छ ।” गुल्मी अस्पताल तम्घासमा कोरोना संक्रमित बिरामीका लागि मात्र ५ वेडको आइसोलेसन रहेको अस्पतालका प्रमुख डा.उत्तम पच्याले जानकारी दिए । गुल्मी अस्पतालमा कम्तीमा १५ देखी २० बेडको आसोलेसन आवश्यक रहेको उनले बताए । ५ बेडको आइसोलेसनले केही अर्थ नराख्ने उनले प्रतिक्रिया दिए ।
गुल्मी अस्पतालमा ५ बेडको मात्र आसोलेसन भएको जानकारी पाएपछि रेसुङ्गा नगरप्रमुख भुसालले नगरपालिकाले तत्काल कम्तीमा २५ बेडको आसोलेसन बनाउने बताएका छन् । सबै ब्यवस्था भइसकेकोले उपयुक्त ठाउँ पाउनसाथ आसोलेसन बनाउने प्रमुख भुसालले दाबी गरे । गुल्मीमा अहिलेसम्म कोरोना संक्रमितको संख्या २ सय २९ पुगेको स्वास्थ्य कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ । कोरोना संक्रमणका कारण ९ जनाको ज्यान गइसकको छ ।